Pero: Notokanana Tamin’ny Fomba Ôfisialy Ho Zava-Boahary Mahaliana Amazona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2012 2:15 GMT
Ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay mikasika ny Alan'i Amazona ity.
Ny Alatsinainy 13 Aogositra 2012 teo, ny tanànan'i Iquitos dia sehatry ny fankalazana marevaka manamarika ny Fanokanana amin'ny fomba Ofisialy an'i Amazona ho iray amin'ny Zavaboahary Mahaliana Fito, nasandratry ny vondrona New7Wonders. Tamin'ny 11 Novambra 2011, no nanambara ireo zavaboahary mahaliana ilay vondrona, araka ny notaterin'ny Global Voices tany aloha.
Notanterahana teo amin'ny fihaonan'ny reniranon'i Itaya sy Nanay ny fankalazàna. Nanatrika teo ireo Peroviana mpanao politika manan-danja, toy ny Filoha Ollanta Humala sy ireo Minisitra Peroviana misahana ny Varotra Ivelany, ny Tontolo Iainana ary ny Kolontsaina. Tonga teo ihany koa ny Filohan'ny Faritr'i Loreto.
Taorian'izay, Bernard Weber, Filohan'ny New7Wonders, dia nanàla ny saron'ilay takela-barahina 120 kilao teo amin'ny 28 de Julio Square, mba ho fahatsiarovana fa mandrakizay io fankatoavana io.
Ity no zavatra lazain'ny bilaogera sasany mikasika ilay vaovao.
Tamin'ny famoahana indray ilay lahatsoratra avy tao amin'ny gazety La República [es], ny bilaogy Chiclin dia nitatitra izay nolazain'ny Filoha Ollanta tamin'ny lanonana :
Nisaotra ny New7Wonders ny Filoha Ollanta Humala tamin'ny nankatoavany an'i Amazona ho iray amin'ireo Tontolon'ny Zavaboahary Mahaliana fito .
[…] “Miady ho an'ny fitoviana izahay, ho an'ny fampivoarana ny any ambanivohitra amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera sy ny tontolo iainana. Hiasa amin'ny alalan'ny tetikasa sosialy ihany koa izahay,” izay no nohamafisiny.
Amazona, Pero. Sary avy amin'i Matt Wootton (CC BY-NC-SA 2.0).
Ny bilaogy Enlace regional [es], mampifandray ny ao amin'ny faritra sy ny governemanta ao an-toerana, dia nizara ny tenin'i Yván Vásquez Valera, Filohan'ny faritr'i Loreto :
[…] io fandraisan'andraikitra io dia mikendry “ny faritra manontolo mba handray anjara ary ho tafiditra ao amin'ny hetsika, ho androm-pankalazàna io andro io ,” hoy izy nanamarika. Ny hetsika dia hatao any amin'ny renivohim-paritany fito, ka Iquitos no ho toy ny foibe. Ny renivohitra tsirairay dia miaraka manomana hetsika samy hafa, ny mpianatra sy ny mponina amin'ny ankapobeny dia ho entanina amin'izany, hoy ny teniny. Nambarany ihany koa fa hisy sary, fanomezam-boninahitra, lanonambe, hirahira sy fifaninanana tononkalo atokana ho an'ny reniranon'i Amazone sy ny Ala Tropikaly.
Nandritra io fotoana io, tamin'ny taratasy nalefan'ny masoivohom-baovaom-panjakana Andina [es], ny bilaogy Mejor hablar de ciertas cosas [es] dia namerina ny tenin'i Bernard Weber raha nanokatra ilay takela-barahina izy :
Weber dia nanamafy fa “ miaina fotoana manan-tantara isika”. “Teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona dia tsy mbola nisy hatrizay afaka niantehitra tamin'ny fifidianana eran-tany, mba hahazahoana fiaraha-mientana eran'izao tontolo izao ary hatramin'izay dia tsy mbola nahazo ny faneken'izao tontolo izao tahaka ny zava-mahagaga fito eran-tany ny voatrolombelona ,” izay no nolazainy.
Nolazainy ihany koa fa ny vokatry ny fifaninanan tamin'ny Zava-boahary Mahaliana Fito dia mampivoitra ny fandraisan'anjara mavitriky ny olom-pirenena tsirairay any amin'ny firenena tsirairay ary avy amin'ny tsirairay izay manohana azy ireo eran-tany.
Fitsangatsanganana ambony lakana any Amazona, Iquitos, Pero. Sary avy amin'i Sam Blanco (CC BY-NC-ND 2.0).
Ao amin'ny CaribeNoticias [es] dia misy vina mamelom-panantenana mikasika ny sehatry ny fizahantany, araka ny famoahann ny lahatsoratra avy amin'i El diario de Yucatán [es]:
Mihevitra Jean Paul de la Fuente, talen'ny New7wonders Foundation any Soisa fa aorian'io fankatoavana io, dia hisy ny vokatra tsara amin'ny fizahan-tany any amin'ny ala Peroviana.
‘Fiakarana 10, 20 na 30 isan-jato eo amin'ny mpizaha tany isan-taona no andrasana ,’ hoy ny nambarany tamin'ny fampielezam-peo tao an-toerana.
Ankehitriny, mandray mpizaha tany 250.000 ny faritr'i Loreto, ary amin'ity taona ity dia andrandraina ny hisian'ny fitomboan'isan'ireo mpizaha tany hiampy 25.000 fanampiny.
Ao amin'ny tranonkala Amazonia, Benzo Gaspar Reategui Ruiz dia mampitaha ity fankatoavana vao haingana ity amin'izay niseho tany Meksika taona vitsivitsy laza izay:
Asa mifangaro ny fizahan-tany, ary ny fahombiazany dia miankina amin'ny fahavitrihan'ny rehetra, manomboka amin'ny fampianarana avo lenta miaraka amin'ny fandaharam-pianarana mifantoka amin'io asa io, tahaka ny nataon'i Meksika tamin'i Cancun, izay nosy tsy nisy na inona na inona dimampolo taona lasa izay fa olona vitsy ihany no nahalala azy. Ny Filoha Gustavo Díaz Ordaz no nanery ny famoronana Tetikasa fampiroboroboana ny fizahantany ary dia izao izy ankehitriny izao, nanjary toeram-pizahantany malaza any Amerika.
Nilain'ny fitantanana any Loreto faran'izay maika io fanekena ho zava-mahaliana eran-tany io ho an'ny fanapahana nilaina hisian'ny teboka fiaingana tsara .
Fa tsy ny olona rehetra no faly, ary ny mpampiasa Twitter dia mizara ny heviny ihany koa.
Selva Trágica (@SelvaTragica) [es] dia miteny amin'ny ben'ny tanànan'i Maynas, faritany misy an'i Iquitos :
@SelvaTragica [es]: Moa ve ny Araben'i Iquitos tsy mba azo nolokoina, miaraka amin'ireto doka rehetra ho an'i Amazona ireto ? Pffff ny ben'ny tanàna!!
Raha miteny amin'ny Filoha Humala ny mpampiasa @primerafuente [es]:
@primerafuente [es]: #EstimadoPresidente [Ry Filoha Malala ] Milomano amin'ny rivotr'i Iquitos ianao raha ny olona kosa tsy misy mahazo izay lazainao ary ny any Cajamarca ny zavatra tadiaviny aminao dia teny iray ihany : FANDRIAM-PAHALEMANA.
Nandritra ireo volana vitsy lasa, niaina fitokonana, korontana ary fihokoana ny tao Cajamarca noho ny fanoherana ny fitrandrahana ambanin'ny tany.
Amazona, Pero. Sary avy amin'i Pearl Vas (CC BY 2.0).
Etsy andaniny kosa, Grinder (@BestiaStoner) [es] dia mandefa hafatra misokatra hoe:
@BestiaStoner [es]: @SickboyRawrs @PercyMeza Iquitos ihany koa dia vahoaka izay, na eo aza ny tabataba, dia afaka mandihy rehefa mahakasika reniranon'i Amazona.
Ary nibitsika ny momba ny Filohan'ny Faritra ihany koa izy :
@BestiaStoner [es]: @PercyMeza Efa nasehon'izy ireo ve ny isan'ny loza sy ny fahafatesana noho ny fanaramana orinasa Shinoa nataon'i Ivan Vasquez? Iquitos ihany koa izany.
Ny NAPA blog [es] dia nizara ity fisaintsainana farany ity :
Mahafinaritra ny zavatra rehetra miaraka amin'io saingy, tsy maintsy miandry ny fifaninannaa iraisam-pirenena ve isika vao afaka manasongadina ny faritr'i Amazona ? Any Pero, misy karazana foko 13 izay miteny amin'ny fiteny 60 ary maro amin'izy ireny no adinon'ny Fanjakana.
Maro ireo ankizy tompon-tany no mijaly noho io tsy firaharahiana io.Ankizy Askaninka 8 amin'ny 10, ohatra, no tsy ampy sakafo.
Ampian'ilay lahatsoratra hoe :
Ankoatra izay, maherin'ny 15.000 ny mponina avy any Wampis sy Awajun no nafindra toerana noho ny asa fitrandrahan'ny Afrodita, izay tsy manaja ny tontolo iainany no sady manimba ny rano amin'ilay renirano. Ary misy orinasa 103 mpitrandraka no miasa amin'ny Cordillera del Cóndor izay mahatonga loza mananontanona ho an'ny fahasalaman'ny lehibe sy ireo ankizy tompon-tany ao amin'ny faritra.
Ambonin'izany, maro ireo Candozi tompon-tany no matin'ny Hepatite B rehefa namindran'ireo mpiasa izay tonga any amin'ny taniny. Ary zavatra kely fotsiny no ataon'ny Fanjakana ho fanampiana azy ireo. Afaka hankalaza miaraka amin'izany rehetra izany ve isika?
Ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay mikasika ny Alan'i Amazona ity..